Talaado, Sept 8 , 2020-Barakac maanta ka bilawday xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne – LaacibOnline
Talaado, Sept 8 , 2020-Barakac maanta ka bilawday xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne
Wararka Maanta- Talaado, Sept 8 , 2020
Barakac maanta ka bilawday xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne
Talaado, September 8, 2020 (HOL) – Boqolaal qoys ayaa maanta ka barakacay xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne kadib markii uu wabiga Shabelle karkaarada ku jabsaday.Xaafadaha Xaawo Taako iyo Kooshin ayaa ah xaafadaha ugu badan ee maanta laga barakacay waxaana la arkayay qoysaskii dagana xaafadahaasi oo u barakacaya goobo kala duwan oo aysan gaari karin biyaha wabiga Shabelle sida deegaanka Ceel-jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne iyo xaafadaha kale ee taaga ah oo aysan biyaha gali karin ee ku yaala gudaha magaalada.Dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa jiray dadaalo xoogan oo lagu doonayay in looga hortago fatahaad uu wabiga ka sameeyo gudaha magaalada inkasto aysan suurta galin, waxaasa xusid mudan in dadaaladaasi ay wali ku badqabaan xaafado kale oo looga barakici jiray fatahaadda wabiga Shabelle sida Xaafada bundaweyn oo inta badan wali aan laga barakicin.
Fatahaaddan maanta looga barakacay xaafado ka tirsan Beledweyne ayaa noqoneysa fatahaaddii saddaxaad muddo 10 bilood ah taasoo walaac xoogan ku abuurtay shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne.
9/8/2020 7:39 AM EST
Talaado, September 8, 2020 (HOL) – Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan qeybta Danab ee ka howl-gasha Jubaland oo kaashanaya ciidamada JSF-ta Jubaland iyo kuwa AMISOM ayaa waxay howl-gallo ka billaabeen deegaanno hoostaga Jannaay Cabdalle oo 60KM ka baxsan magaalada Kismaayo.
9/8/2020 2:40 AM EST
Talaado, September 8, 2020 (HOL) – Sida Ilo ku dhow dhow madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle ay u sheegeen warbaahinta madaxweynayaasha labada maamul ayaa waxay ku wajahanyihiin magaalada Baydhaba, iyagoo kulan wada tashi ah la yeelanaya madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen.
9/8/2020 2:34 AM EST
Talaado, September 8, 2020 (HOL) – Kooxda Al-shabaab ayaa saacado kooban qabsatay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada dhexe, waxayna la wareegeen xarumihii dowladda, waxay sidoo kale xabsiyada kasii daayeen maxaabiis dowladda u xirnaa.
9/8/2020 1:26 AM EST
Talaado, September 8, 2020 (HOL) – Beeraleyda iyo ganacsatada Jaadka Miraa ee dalka Kenya ayaa laga yaabaa inay sugaan waqti dheer inta laga qaadayo xanibaada Qaadka ay u dhoofin jireen Soomaaliya. Waxay arrintan ku qaadan kartaa tan iyo xilliga doorashada kadib oo dib loo furidoono howlihii diblumaasiyadeed.
Talaado, September 8, 2020 (HOL) – Bangiga Adduunka ayaa u magacaabay Keith Hansen inuu noqdo agaasimaha cusub ee waddamada Kenya, Rwanda, Somalia iyo Uganda laga bilaabo 8-da bisha Sebtember.
← Kia Joorabchian delivers verdict on Arsenal’s Mesut Ozil decision amid Philippe Coutinho update
Somaliland to open office in Taiwan Wednesday →
Jimco, Aug 7 , 2020-Galmudug oo la wareegtay garoonka diyaaradaha Cadaado
Arbaco, July 29, 2020-Soomaaliya oo helaysa $25M si loogu xoojiyo miisaaniyada lagu yareynayo saameynta COVID19